Rekha Oo Ugu Dambeyn Kashiftay Sidii Foosha Xumeyd Ee Loogu Galay Filimka Anjana Safar, Atoore Ayaa Kufsan Rabay - Hablaha Media Network
Rekha Oo Ugu Dambeyn Kashiftay Sidii Foosha Xumeyd Ee Loogu Galay Filimka Anjana Safar, Atoore Ayaa Kufsan Rabay
HMN:- Markasta wax qariib ah ayey aheyd in si dhab ah aflaanta Bollywood looga run sheego ficillada dareenka galmo xambaarsan… Atariishooyinka Bollywood ayaana intooda badan ka xishoon jiray inay atooraha shaashadda ku shumiyaan barisamaadkii.
Si kastaba ha ahaatee, aflaanta Galbeedka xitaa atariishooyinku raalli kama noqdaan arrintaan, waana sabab laga daliishan karo hadalkii kasoo yeeray filimsameeyaha reer Italy Bernardo Bertolucci sannadkii 2013kii.
Bernardo Bertolucci wuxuu xilligaas daaha ka qaaday in intii lagu jiray filimkiisii Last Tango In Paris ee sannadkii 1972dii aysan marnaba atariishadii filimkaas Maria Schneider dooneyn inay qaawiso qeybteeda dambe, inkastoo ay xaqiiqadu aheyd in looga baahnaa inay sidaas sameyso si ay uga run sheegto qiso galmo oo gadaal looga tegayo atariishada oo ku jirtay sheekada filimkaas.
Maria waxay aheyd waqtigaas 19 sanno jir, waxaana ay filimkaas la hogaamineysay Marlon Brando oo xilligaas ku beegnaa 48 sanno jir. Ninkii sameeyey filimkaas Bernardo Bertolucci ayaana wuxuu daaha ka qaaday qaabkii uu ugu qanciyey inay jisho qeybtaas adag ee filimkaas, wuxuuna ku yiri: “Maria kaama doonayo inaad jilliin oo keliya sameyso waxaan kaa doonayaa inaad dareen muujiso”.
Sheeko galmo oo loo ekeysiiyey filimkaas ay leedahay shirkadda Hollywood, ayaana waxaa Bollywood uu ku sameeyey filimkii Anjana Safar, si kastaba ha ahaatee, waxa markaan laga run sheegayo waxay aheyd dareen jaceyl.
Hubanti waxaa ah dhacdooyin badan oo aysan saxaafaddu baahin ayaa ka dhacay filimkii Anjana Safar, atariishada halyeeyda ah ee Bollywood Rekha oo jishay filimkaas ayaana daaha ka qaaday inuu shumis xambaarsam dareen galmo ku sameeyey atoorihii weynaa ee hogaaminayey filimkaas Biswajeet, inkastoo ay xaqiiqadu aheyd inay tahay 15 sanno jir.
Buuggeeda Rekha: The Untold Story, ayuuna qoraagga Yaseer Usman kaga sheekeeyey wixii ka dhacay filimkaas Anjana Safar iyo weliba sidii loogu xadgudbay atariishada weyn ee Rekha. Iyadoo Raja Nawathe iyo Biswajeet ay doorar hogaan ah ka ahaayeen filimkaas. Ninkii iska lahaa filimkaas ayaana doonayey inuu Biswajeet qabto Rekha oo aan waxba ka ogeyn ka dibna uu baashi dhab ku dhaho.
Atooraha halyeeyga ah Biswajeet waa uu ka aqbalay hadalkaas ninka agaasinka u hayey filimkaas wuxuuna kusoo dhegay 15 sanno jirta Rekha isagoo marka hore gacmaha soo qabsaday ka dibna muddo shan daqiiqo ah ayuu baashi ku haye.
Wixii intaas ka dambeeyey Rekha waa ay ilmeysay sababtoo ah waxayba arrinta u fahantay inuu dareen galmo ka damacsan yahay Biswajeet, kooxdii filimkaas ayaana ku qosleysay 15 sanno jirtaan, halka qaarkoodna ay fooronayeen. Biswajeet wuxuu goordambe daaha ka qaaday in aragtidii uu ku shumiyey Rekha ay aheyd mid kasoo maaxatay ninka agaasinka ka ahaa filimka balse uu la yaabay dareenka ay goobta ka muujisay.